QORSHEE XEELADAADA GANACSI ADIGOO RAACINAYA ABAALMARIN KU GUULAYSIGA BARAYAASHA FOREX
Qalabkayaga waxbarasho ayaa waxaa si gaar ah u abuuray taxliiliyaasha maaliyadded ee ugu khibrada badan shirkadaha FX, oo ah faa’idadaada. Ka akhri library-gayaga heer caalamiga ah afkaaro, warbixno gaar ah, fiidiyowyo iyo xaqiiqooy si u aad gaarto go’aano ganacsi oo xaqiiqa.
FARIIMAHA FOOMKA, FARIIMAHA WEBINARS & EXPO FINANCIAL EXPO
FxPRIMUS ahaan waxaan aaminsanahay samaynta xidhiidh shakhsiyeed oo aanu kula yeelo, la yeelano macaamiisheena qiimaha leh iyo shuraakadayada Anaga oo iskudaba ridayna munaasabado sare iyo siminaaro, waxaan abuurna fursad si aan kuula kulano, dadka aan u adeegno, oo aan kaa caawinno horumarinta khibradahaaga ganacsi ama aragtiyadaha ganacsigaaga. Soo booqo, mid kamid ah munaasabadaha ugu balaaran ee ka dhaca daafaha caalamka oo dhan, la kulan shaqaalahayaga aad ka u horumarsan ee u jajaban inay kaa caawiyaan inaad guul la gaadho FXPRIMUS.
Wararka Maalin laha ee Suuqa
Is diwaangali si aad u hesho faallooyinkayaga maalin laha ah, kuwaas oo si gaar ah loogu diyaariyo macaamiishayada. Ogow wax badan oo ku saabsan sida suuqyada ay u saameeyo qiimaha aalada ganacsi ee aad xiisayso, ku jaangoo xeeladaada ganacsi maanta.
Faallooyinka maalinlaha ah ayaa hada lagu heli karaa luqadahaan: English, Chinese, Malaysia, Spanish and Thai. hadii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeri ah oo ku saabsan adeegyada laga heli karo luqadaada, fadlan la xiriir support@fxprimus.com
Ku hel si dhakhso leh isbadalada kusoo kordha suuqa, ku hel fikrado ganacsi, fariimaha moobilkaaga, oo si toos ah ugu soo dhacaya moobilkaaga. Dhigida ganacsiyo sargo’an si aanay kuu dhaafin fursadani. Ogow wax badan oo ku saabsan adeega gaarka ah ee SMS iyo samaynta xeeladaada ganacsi maanta
DOORASHADA FARIIMAHA SMS
Ka ganacsiga badeecadaha margin waxay ku lug leedahay halista sare, wixii ra’yi ah, war, cilmi baaris, falanqayn, qiime ama macluumaad kale oo ay hesho FXPRIMUS waxaa loo bixiyaa faallo guud oo suuqa mana aha inay noqoto talo maalgashi.
Hel signalis ganacsi oo sax ah iyo caawimaad hal qof iyo hal caawiye khabiiradayada suuqa ee Stavros Tousios. U hel jawaabo su’aalaha ganacsi ee warbaahinta iyo cusboonaysiinta awoodahaaga ganacsi kadib caawimaada, adeeg shaqsiyeed Adeeggan VIP-da waxaa heli kara kuwa haysta akoontada live ka ah lehna hadhaa USD 10,000.
MAALGASHO AKOONKAAGA HADDA